उच्च हिमाली क्षेत्रका जोखिमः कोशी बेसिन भाग १ |The Third Pole
उच्च हिमाली क्षेत्रका जोखिमः कोशी बेसिन भाग १
पहिरो, भूकम्प, पग्लँदो हिमनदी तथा भयानक बाढीले नेपाल–तिब्बत सीमाना नजिक बस्ने मानिसहरूको जनजीवन अप्ठ्यारो बनाएको छ ।
रमेश भुसाल, जुन 29, 2016
यो आलेख चार भागको शृङ्खलाको पहिलो भाग हो । thethirdpole.net का नेपाल सम्पादक रमेश भुषाल र फोटोग्राफर नबीन बराल कोशी नदीको विभिन्न सहायक नदीहरूको तटै–तट तिब्बती सिमानादेखि भारतीय सिमानासम्म यात्रा गरेका थिए ।
तिब्बती सीमा नजिकै, नेपालको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा, झण्डै दुई वर्षअघि जुरेको वस्ती ध्वस्त पारेको पहिरोले छाडेको गेग्र्यानको थुप्रोमुनीबाट पानीको तीव्र प्रवाह निस्किन्छ।कुनै समय नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा व्यस्त लोकमार्ग पहिरोपछि कैयौँ महिनाको लागि बन्द भयो । पहिरो हटाएर लोकमार्ग खुलेको केही दिनमै नेपालमा ठूलो भूइँचालो गयो जसले गर्दा लोकमार्गमा थुप्रै पहिराहरू गए र लोकमार्ग फेरि बन्द भयो ।
भूकम्प गएको एक वर्षभन्दा बढि वितिसक्दा, नेपाल सरकारको थुप्रै अनुरोधका बाबजुद चीनले पहिरोको उच्च जोखिमका कारण सीमा नाका खोलेको छैन । बरु चीन सिन्धुपाल्चोकको पश्चिममा रहेको रसुवा जिल्लाको रसुवागढी नाका खोल्नमा लागेको छ । भलै यो क्षेत्रमा पनि भूकम्पले उत्तिकै क्षति पु¥याएको छ । चीनले नियोजित रुपमै सिन्धुपाल्चोकको सीमा नाका नखोली नेपाललाई रसुवागढी हुँदै केरुङसम्म जोड्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । केरुङलाई सन् २०२० सम्ममा गुङ्झाइ–तीब्बत रेल सञ्जालमा जोडिने लक्ष्य लिइएको छ । यद्यपि, चीन सरकारले यो बुझाइ गलत भएको र भौगर्भिक कारणले मात्र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका नखोलिएको बताएको छ ।
रातो घेराभित्रको क्षेत्र कोशी बेसिन क्षेत्र हो ।
सन् २०१४ मा, जुरे पहिरोले पूरै गाउँ बगाइदियो । यसमा परेर १५६ जनाले ज्यान गुमाए । लोकमार्गको झण्डै २ किलोमिटर भाग भत्कियो र कैयौँ महिनाको लागि सडक यातायात अवरुद्ध भयो । अहिले पनि यहाँ केही लोकल बस र सुनकोशी नदीबाट ढुङ्गा बालुवा बोक्ने केही ट्रिपरहरू मात्र देखिन्छन् । पहिरोको ढिस्को चढी माथि पुगेर तलतिर हेर्दा नागवेली परि बगिरहेको सुनकोशी देखिन्छ । यो नदीलाई तिब्बतमा पोइकु नामले चिनिन्छ, तल बग्दै जाँदा भोटेकोशीको नामले चिनिन्छ र अलि तलपुगेपछि यो सुनकोशीको रुफमा सप्तकोशीको एक सहायक नदीको रुपमा बग्दै नेपालभारत सिमा पुग्छ ।
जुरे पहिरोको ढिस्कोमाथि बस कुर्दै एक स्थानीय ।
जुरे पहिरोपछि सुनकोशीले आफ्नो बाटो फेर्यो । पहिरोले नदी थुनिएर विशाल अस्थायी तलाउ बनेको थियो जसले लोकमार्ग, दुईटा अग्ला भवनसहित सडक छेउका कैयौँ घरहरू र विद्युत प्रशारण टावर डुबाएको थियो । सत्तरी वर्षे जीत बहादुर तामाङ पहिरो गएको भयङ्कर रातलाई यसरी सम्झिनुहुन्छ, ‘‘मध्यरातमा लगातार बम पड्केको जस्तो ठूलो आवाज आयो । पूरै अँध्यारो थियो । पारीपट्टिबाट गाउँलेहरूले भाग भाग भनेर चिच्याउँदै थिए जस्तो लाग्छ, तर कहाँ जाने? पहिरो भन्ने हामीलाई थाहा थिएन । धन्य, हामी सडकै सडक उत्तरतिर लाग्यौँ र अर्को गाउँतिर उकालो लाग्यौँ ।’’
पहिरोले आफ्ना थुप्रै नातागोता र गाउँलेहरूको ज्यान लिएपछि तामाङ बगरभन्दा केही माथि सानो झुपडीमा डरैडरमा बस्दै आएका छन् । पोहोर साल गएको भूकम्पले उनको जिन्दगीलाई झन् गा¥हो बनाइदियो । ‘‘जे बचेको छ त्यसैसँग बस्नुबाहेक मेरो कुनै उपाय छैन । अब वर्षामा झन् गा¥हो होला,’’ बाँस काँट्न हँसिया उद्याउँदै तामाङले भने ।
पचासी प्रतिशत भूभाग हिमाल र पहाडले ओगटेको नेपालमा अक्सर पहिरो गैरहन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष साना ठुला गरि औसत १२,००० ओटा पहिरो जाने गर्छ जसमा ३०० बढि मानिस मर्छन् ।
‘‘ठुला पहिराले नदी थुन्न सक्छन् । पहिले पनि यस्तो भएको छ, र जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि हुने प्रक्षेपण गरिएकाले यस्ता घटना भविष्यमा बढ्न सक्छन्,’’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँको भूगोल विभागका प्राध्यापक नरेन्द्रराज खनालले भने ।
सक्नेले गाउँ छोडेका छन्, तर धेरैका लागि यो सम्भव छैन । पहिले व्यस्त रहने सडक सुनसान भएपछि, बाइस वर्षे ड्राइभर लङ्क लामा बेरोजगार भएका छन् । पहिरो हटाएपछि व्यवसाय राम्रो हुँदै थियो । यत्तिकैमा भूकम्पले गर्दा चीनको सीमा नाका बन्द भयो । ‘‘म जस्तो दुःख पाएका सयौँ युवाहरू छन् गाउँघरमा । हाम्रो काम पनि छैन, जग्गा पनि छैन,’’ पहिरो र भूकम्पमा भाञ्जी र धेरै नातागोता र साथीहरू गुमाएका लामाले भने ।
जुरे पहिरोले बनाएको बाँधको कारण पानी मुनी डुबेको घर र विजुलीको पोल ।
नेपालमा पहिलेदेखि नै पहिरो धेरै जाने गरेको भए पनि, विज्ञहरू पोहोरको भूकम्पपछि थप चिन्तित छन् । भूकम्पले ३००० भन्दा बढि पहिरोहरू गएको बताइएको छ । कोशी बेसिनमा पनि नराम्रो प्रभाव परेको थियो । ४० प्रतिशत भूभाग समुद्री सतहदेखि ४००० मिटरमाथि रहेको र ३० प्रतिशत भूभाग ३० डिग्रीभन्दा बढि भिरालो रहेको कोशी बेसिन भौगर्भिक हिसाबले देशकै सबैभन्दा नाजुक क्षेत्र हो ।‘‘यहाँ ठुला पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ । पहिरोलाई बुझ्न र यसबाट बच्न जटिल हुनाले समग्र पहिरो जोखिम व्यवस्थापन योजनाको तत्काल आवश्यकता रहेको छ,’’ काठमाडौँमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)का रिमोट सेन्सिङ् विशेषज्ञ देउराज गुरुङले भने ।
सरकार र स्थानीय समुदाय दुवैले पटक–पटक दिइएको चेतावनी बेवास्ता गरेकाले जुरे पहिरोमा त्यति धेरै मानवीय क्षति भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । ‘‘त्यो क्षेत्रलाई २०३०को दशकदेखि नै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र भनी पहिचान गरिएको थियो । २०७१मा पूरै पहाड खस्नुअघि त्यही क्षेत्रमा थुप्रै चोटी साना–साना पहिरो गएका थिए, ’’ गुरुङले बताए ।
हिउँ कम, बाढी धेरै
यस्तो प्रभाव परेको सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा मात्र होइन । सुनकोशी जस्ता नदी उत्पत्ती हुने हिमालहरूमा समस्या सुरु भैसकेको छ । बढ्दो तापक्रमले गर्दा हिमनदीहरू तीव्र रुपमा पग्लिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । एक अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक अनुसन्धान टोलीले गत वर्ष सप्तकोशीको महत्वपूर्ण सहायक नदी दुधकोशी नदीमा रहेका हिमनदीहरूको पहिलो विस्तृत अध्ययन प्रकाशित ग¥यो । दुधकोशी सगरमाथा क्षेत्र हुँदै बग्छ । ती वैज्ञानिकहरूले सगरमाथा क्षेत्रका सबैजसो हिमनदीहरू यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा सुक्ने सम्भावना रहेको चेतावनी दिएका छन् । हिमरेखाको उचाइ बढ्दै गएकाले हिमनदी पग्लने क्रममा वृद्धि र बरफ सञ्चयको मात्रा घटेको पनि वैज्ञानिकहरूले बताए ।
टोलीका मुख्य वैज्ञानिक जोसेफ शियाले यसलाई कुनै व्यक्तिगत ब्याङ्क खातासँग तुलना गरे । ‘‘वर्षभरिमा तपाईँले खातामा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ र यसबाट खर्च पनि गर्नुहुन्छ । वर्षको अन्त्यमा, तपाईँले खर्च गरेको रकमभन्दा जम्मा गरेको रकम धेरै भयो भने तपाईँसँग धनात्मक निक्षेप सञ्चित हुन्छ । हिमनदीलाई पनि त्यसैगरि बुझ्न सकिन्छ । हिमनदीहरूको राश हिउँ परेपछि बढ्छ र पग्लेपछि घट्छ । वर्षभरिमा जम्मा भएको हिउँको राशबाट पग्लेको हिउँ घटाउँदा हिमराशको ‘खुद सञ्चिती’ आउँछ ।’’
सगरमाथा र हिमालयका अन्य अग्ला चुचुरा हेर्न नेपालमा हरेक वर्ष हजारौँ पर्यटकहरू आउने गर्छन् । तर यी सुन्दर हिमचुचुराहरूमा हिउँ र बरफ नरहने हो भने कस्ता देखिएलान् ? यी हिमाल तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने लाखौँ मानिसको लागि पानीको, जीवन र जिविकोपार्जनको स्रोत समेत हो । २१ पटक सगरमाथा चढेका आप्पा शेर्पालाई यसैको चिन्ता छ । उनी हिमाल बचाउन विश्व समुदायलाई झक्झक्याउन चाहन्छन् । सन् २०१२ मा संसारलाई यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव देखाउन उनी आफ्नो समूहसँग तीन महिनासम्म १६०० किलोमिटर पदयात्रा गरे । ‘‘सबैभन्दा चिन्ता लाग्ने कुरा चाहिँ हिमालमा थोरै हिउँ सञ्चित भैरहेको । म सगरमाथा चढ्दा पनि यो महशुस गर्छु । यो सामान्य प्रक्रिया होइन,’’ उनले भने ।
फैलँदै हिमताल, बढ्दै जोखिम
हामीले हिमताल फुटेर आउने बाढीको जोखिम उच्च रहेको भनी पहिचान गरिएको सुनकोशी नदीको किनारै किनार यात्रा गर्यौँ । इसिमोडका अनुसार, नेपालका हिमालमा रेकर्ड गरिएका हिमताल फुटेर बाढी आएका २४ प्रकोपमध्ये, तीन ध्वंशात्मक सहित, १६ ओटा कोशी बेसिनमा भएको थियो ।
सुनकोशीको उद्गम विन्दु तिब्बतमा रहेको पोइकु नदीको झाङ्जाम्बु हिमताल हो । सन् १९८१ मा यो ताल फुट्यो । एकघण्टामा १ करोड ९० लाख घन मिटर पानी प्रवाह भई आएको बाढीले कैयौँ घर ध्वस्त भए, र १२ ओटा पुल, २७ किलोमिटर सडक र सुनकोशी जलविद्युत बाँधको एउटा गेट भत्कियो ।
सुनकोशी किनारमा रहेको पाङ्ग्रेटारका ओभिध्वज कार्कीले १९८१ को बाढी देखेका थिए । त्यसपछिका समयमा गाउँलेहरूलाई यस्तो घटना फेरि हुनसक्ने चेतावनी धेरैचोटी दिइएको छ । हिमतालहरू उच्च हिमाली भेगमा हुन्छन् । तर हिउँ पग्लाइको गति बढेसँगै यी तालहरू तीव्र रुपमा फैलिरहेका हुनाले, गाउँवस्ती र खेतहरू बग्ने जोखिम बढ्दै गएको अनुसन्धानकर्ताहरू बताउँछन् । ‘‘माथि हिमालमा के भैरहेको त हामीलाई थाहा छैन, तर पछिल्ला केही दशकहरूमा बाढीले गर्दा हामीले धेरै धानखेत गुमाइसक्यौँ,’’ कार्कीले भने ।
हिमताल फुटेर आउने बाढी अक्सर ध्वंशात्मक हुन्छन् र यसको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन तर क्षति कम गर्न सकिन्छ । ‘‘एउटा उपाय भनेको तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसलाई सचेत गराउन पूर्वजानकारी प्रणाली जडान गर्ने हो । तर दीर्घकालीन समाधान चाहिँ बाढी आउने सम्भावना भएको क्षेत्रमा बस्ती बसाउन हतोत्साहित गरि समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराउनु नै हो,’’ यस क्षेत्रमा वृहत अनुसन्धान गरेका नरेन्द्र खनाल भन्छन् ।
कार्कीलाई जोखिमको ’boutमा थाहा भएपनि यसरी नै बस्नुको विकल्प छैन । ‘‘परिवार पाल्ने अर्को कुनै उपाय नभएकोले म यो ठाउँ छोडेर जान सक्दिन ।’’ सरकारले जोखिम घटाउन केही कदम चालेको छ, तर यो पर्याप्त छैन । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले केही किलोमिटर माथि बाह्रबिसेमा नदीको सतह सामान्यभन्दा बढी देखिएमा तल्लो तटमा बस्ने समुदायहरूलाई सचेत गराउने भनी नदीको सतह नाप्न खम्बा गाडेको छ । तर, हामी त्यो ठाउँमा पुग्दा उक्त खम्बा विरुप अवस्थामा थियो र राम्ररी मर्मत सम्भार समेत गरिएको थिएन ।
Raju | 30 जून, 2016 at 11:23
कविराज घिमिरे | 03 जुलाई, 2016 at 08:52
ramesh | 06 जुलाई, 2016 at 13:35
Sabin | 06 जुलाई, 2016 at 15:59
Binod Parajuli | 31 जुलाई, 2016 at 10:11
ramesh | 02 अगस्त, 2016 at 13:18